Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အာဘော်နှင့်အမြင် > ဆောင်းပါး
ဒုက္ခဆိုတာ ဘဝမလှသူတွေအတွက်	အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၄ မိနစ်	ဆောင်းပါး	နို့ဖိုးတောင်ကုန်းပေါ်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင် တိမ်တွေကြားက ဖောက်ထွက်လာတဲ့ နေမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်က တောတောင်တခုလုံး ဖြာကျနေတယ်။ အခုလို မိုးတွင်းဆိုရင် တောတောင်ကို မြင်ရတလှည့်၊ မမြင်ရတလှည့်။ ...
ပြိုင်ဘက်နဲ့ ရန်သူ ...	တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၀၈ မိနစ်	ဆောင်းပါး	နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးကြတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံတဲ့ စာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဘက်ဟိုဘက် မီဒီယာတွေမှာ အသောင်းသောင်း အပြောင်းပြောင်း ရေးကြတဲ့အခါမှာ `ရန်သူ´ `ရန်သူ့ကို´ `ရန်သူ့လူ´ စသဖြင့် ...
လူထုရန်သူ	တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၆ မိနစ်	ဆောင်းပါး	၁၉၂၉ ခုနှစ် အမေရိကန် စီးပွားပျက်ကပ်ကာလ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတွင်း ရာဇဝတ်မှုများမှာ အလွန်ပင် ထူပြောလာခဲ့သည်။ အိုက်(စ)ကရင်လို မုန့်မျိုးကိုပင် အလစ်သုတ်မှုမှအစ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုများအထိ ရှိခဲ့ ...
စစ်အတွေးအခေါ်- အနုမြူ လက်နက်နှင့် နအဖ လှိုဏ်ခေါင်း စစ်ပွဲသဏ္ဌာန်	သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်	ဆောင်းပါး	မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်အုပ်စိုးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ တပ်မှူးများ ညီလာခံဟာ အရေးပါတဲ့ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ကျင်းပတဲ့ တပ်မတော် အစည်းအဝေးမှာ ...
သီးသန့် ခုံရုံးနဲ့ သီးသန့် ဥပဒေ	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၄ မိနစ်	ဆောင်းပါး	စွပ်စွဲခံရသူများ၏ ခုခံချေပခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂ (စ) အမှုတွင် ခုခံချေပခွင့်နှင့် ဥပဒေအရ အယူခံပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထားရှိသည်။ ခုခံချေပခွင့်ဆိုသည်မှာ တရားလိုဘက်မှ စွပ်စွဲထားသည့် စွပ်စွဲချက်များကို ခုခံချေပရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၃)	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၀၂ မိနစ်	ဆောင်းပါး	မွန်ပြည်နယ် စည်းရုံးရေးခရီးက ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ည ၇ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်ခဲ့ကြ၏။ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်က ချောချောမောမောနှင့် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၂)	အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၇ မိနစ်	ဆောင်းပါး	ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုံးလုံး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ နောင်လည်း ဒီလို ဥက္ကဋ္ဌမျိုး ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်မှာ မရှိရအောင်၊ မပေါ်လာရအောင် အားလုံး ကူညီကြပါ။ ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်မှာ မရှိရအောင်၊ မပေါ်လာရအောင် အားလုံးကူညီကြပါ ...
နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစီရင်ရေး အသုံးချမှု	တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၁ မိနစ်	ဆောင်းပါး	NLD ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့်အဖွဲ့သည် အထက်မြန်မာပြည် ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းအတွက် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရာ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ ကျီရွာအနီး၌ ၃၀-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၁)	တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၂၂ မိနစ်	ဆောင်းပါး	၁၃ ရက်ကြာသည့် အထက် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှ ပြန်ရောက်ပြီးစ, ရက်များမှာပင် အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း၌ ပြဿနာအချို့ ရှိနေပြီဟူသည်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိထားခဲ့၏။ ပြဿာနာက အတွင်းစည်း ပြဿနာ။ ပထမတွင်မူ…တိုးတိုးတိတ်တိတ်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၀)	သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၂၁ မိနစ်	ဆောင်းပါး	စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးတင်ဦးတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အား ဖွဲ့စည်းထူထောင်လိုက်၏။ NLD အား ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်သော်လည်း တိုင်းပြည်သို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းကိုမူ မပြုလုပ်ရသေး ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 58 စုစုပေါင်း 63	ကြော်ငြာ
We have 90 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved